Vavaka atao rehefa miatrika fahavalo
“Aza mangina fotsiny, Andriamanitra ô!” (1)
Toy ny tsilo avadibadiky ny tadio ny fahavalo (13)
Jehovah no anaran’Andriamanitra (18)
Hira. Salamo nataon’i Asafa.+ 83 Aza mangina fotsiny, Andriamanitra ô!+Aza mangina tsy miteny na mijery fotsiny, Andriamanitra ô! 2 Jereo fa mitabataba be ny fahavalonao,+Ary mirehareha* ireo mankahala anao. 3 Fetsifetsy izy ireo ka manao tetika mangingina hamelezana ny vahoakanao;Mikaon-doha hanohitra an’ireo olona tena tianao* izy ireo. 4 Hoy izy ireo: “Andao hofongorantsika ny fireneny,+Amin’izay dia tsy hotsaroana intsony ny anarana hoe Israely.” 5 Miara-mamorona paikady* izy ireo;Manao fifanekena hanoherana anao+ izy ireo, 6 Dia ny tranolain’i Edoma sy ny Ismaelita, Moaba+ sy ny Hagarita,+ 7 Gebala sy Amona+ sy Amaleka,Ary Filistia+ sy ny mponin’i Tyro.+ 8 Miaraka amin’izy ireo koa i Asyria;+Manampy* an’ireo taranak’i Lota+ izy rehetra. (Sela) 9 Ataovy toy ny nanaovanao ny Midianina+ izy ireo,Toy ny nanaovanao an’i Sisera sy Jabina teo amin’ny reniranon’i* Kisona.+ 10 Naringana tany En-dora+ izy ireo,Ka lasa zezika ho an’ny tany. 11 Ataovy toy ny nanaovanao an’i Oreba sy Zeba+ ny olona ambony eo aminy,Ary ataovy toy ny nanaovanao an’i Zebaha sy Zalmona+ ny andrianany.* 12 Nilaza mantsy izy ireo hoe: “Andao halaintsika ilay tany ipetrahan’Andriamanitra.” 13 Ataovy hoatran’ny tsilo avadibadiky ny tadio izy ireo,+ ry Andriamanitro ô,Hoatran’ny mololo entin’ny rivotra. 14 Toy ny afo mandoro ala,Toy ny lelafo mandrehitra tendrombohitra,+ 15 Ho toy izany anie no hanenjehanao azy amin’ny rivo-mahery,+Sy hampihorohoroanao azy amin’ny tafio-drivotra avy aminao!+ 16 Ataovy afa-baraka tanteraka izy ireo,*Mba hitadiavany ny anaranao, Jehovah ô! 17 Ho menatra sy hihorohoro mandrakizay anie izy ireo,Ary ho afa-baraka sy ho ringana; 18 Enga anie ho fantatry ny olona fa ianao irery ihany, ilay manana anarana hoe Jehovah,+No Avo Indrindra manerana ny tany manontolo!+
^ Na: “mampitraka ny lohany.”
^ Abt: “olona nafeninao.”
^ Abt: “Miara-midinika amin’ny fo iray.”
^ Abt: “Lasa sandry ho.”
^ Na: “mpitarika eo aminy.”
^ Abt: “Fenoy fahafaham-baraka ny tarehin’izy ireo.”